Kune vakadzi mudzimba vanosvika pakuchembera vasina kumbonakirwa nekuiswa! - Masasi eHarare
DzeBonde Kune vakadzi mudzimba vanosvika pakuchembera vasina kumbonakirwa nekuiswa!
Kune vakadzi mudzimba vanosvika pakuchembera vasina kumbonakirwa nekuiswa!
2. Kana une murume anoti pese pese anokasira kutunda, zvinokwanisika here kuti azomboitawo zvine mwero zvinogutsa mukadzi wake pabonde? Kune vakadzi mudzimba umu vanokura kusvika pakuchembera vasina kumbonakirwa nekuiswa nemurume. Asi iye achitonakirwa chose achizvirova dundundu kuti ndiye shasha yekusvira mukadzi.
Chaitisa kuti tidzokorore nyaya iyi kuva patakamboitsanangura kare ndechokuti ndakaenda kune umwe musangano wevanamai vemba paitaurwa nyaya dzakasiyanasiyana dzokuvaka misha yedu. Nyaya yekuhurirana payakapinzwa mudariro pana vamwe mai vakataura kuti pfungwa dzavo dzinowanzofunga zvekuhura nekutii murume wavo haana basa nekunakirwa kwangu. Anongoti kupinza mboro nokutodiridzira hurume. Zvinovashungurudza chose chose. Saka vaiti vanoda mazano okuti murume ambotorawo nguva pakusvirana
Paiva nevamwewo mai vaiti vakadzidza zve psychology vaiti vanonzwisisa kuti chimwe chezvikonzero zvekukasirisa ndisu varidzi vevarume. Tinotadza kupa murume nguva yekudzirira kunonoka kudiridzira.
Ngatitange nenguva yekukura kwemwanakomana. Kana mukomana ava nemakore gumi nemana, mboro yake inowedzera kukura uye inotanga kumira pese pese nekuzvirotera avete. Ukuzve anotanga kunakirwa nekuzviita chimhandara maoko zvokuti anopota achizvinakira ega. Zvino mukutaurirana kwevakuru nevadiki mukomana anokasira kunzwisisa kuti vakuru havafariri munhu anoita chimhandara maoko. Izvi zvinoreva kuti pese paanoita ega, anoita muchivande uyezve anoita achikasira chose kuti asawanikidze achiita bonyora.
Pakuita achikasira ipapo ndipo paanodzidza kukasira. Anongoti chero akaenda kubathroom kwekanguva kashomanana otodzoka apedza chimhandara maoko imi vemhuri musina chamambofungira nokuti aita nguva shoma.